ဟတ်ချိုးကလေး တစ်ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ဟတ်ချိုးကလေး တစ်ခု
Posted by moethidasoe on Feb 2, 2011 in Health & Fitness | 14 comments
တီဘီ နမိုးနီးယား နားပြည်ယို နှာရည်
ဟတ်ချိုးဆိတ်ဖွား အသက်တစ်ရာ အနာမရှိ .. (ရှေးလူများရဲ့ ရေရွတ်သံ .. နောက်လူတွေကတော့ ဘယ်လိုရွတ်တယ် မသိနိုင်တော့)
ဟတ်ချိုး အဟမ်း ဘွတ် (သင်္ဂဇာ ဆရာတော် ပုံပြင်ထဲမှာ ပါတာ ..)
ဟာ .. ရှင့် နှာရည်တွေ စင်ကုန်ပြီ .. သတိလဲ ထားဦးလေ .. ဟာ ..ဆားစ်တွေ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးတွေ ကူးကုန်တော့မှာပဲ .. ရှင်ကလဲ .. နှာချေမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ နှာခေါင်းကို တစ်ခုခုနဲ့ ကာထားမှပေါ့ .. ဒါမှ နှာရည်တွေ သူများကို မစင်မှာပေါ့ ..
ဆရာမကလဲ .. ရုတ်တရက် ချေချင်တာ ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ ..
ရုတ်တရက်ဆိုရင်လဲ ဘာမှ မတွေ့ရင် လက်ဝါးနဲ့သာ ကာလိုက်ပေါ့ .. နောက်မှ လက်ကိုင်ပ၀ါဖြစ်ဖြစ် တစ်သျှူးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သုတ်လို့ ရတာပဲဟာ .. အခုတော့ ရှင့်ရဲ့ နှာရည်တွေ သူများကို စင်ကုန်ပြီ .. အဲဒါဟာ ရောဂါဖြန့်ဖြူးတဲ့ တရားခံပဲ ..
ဆရာမကလဲ .. ကျွန်တော်က ရိုးရိုး အအေးမိတာပါ ..
အေးလေ ရှင်က ကျားကိုးစီး စားမကုန်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဆိုတော့ အအေးမိတာလို့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ ထား ပြောနိုင်ပေမယ့် .. အဆုတ်မကောင်းတဲ့လူ .. ကလေးတွေ .. နာတာရှည် ဖျားနေတဲ့ လူတွေအတွက်ကျ တော့ .. ဘယ် ရိုးရိုးဖြစ်မှာလဲ .. အဆင်မသင့်ရင် နမိုးနီးယား ဆိုတဲ့အဆင့်တွေ ရောက်သွားတတ်တယ် ..
ဟုတ်ရဲ့လား ဆရာမရယ် .. ကျွန်တော့်ကိုများ ဖြဲချောက်နေတာလား .. တကယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် နောင်ကို ဆင်ခြင်ပါ့မယ် ..
အေး .. ရှင်လဲ သိအောင် တစ်ခြားလူတွေလဲ သိသွားအောင် ဟတ်ချိုးအကြောင်း ပြောပြမယ် .. ဘာမှ မသိပဲ အပြောခံရမှာကြောက်လို့ ဆင်ခြင်တာထက်စာရင် သိပြီး ဆင်ခြင်တော့ ရေရှည် တည်တံ့တာပေါ့ .. ကောင်းတာလေးတွေက စ ပြောရင် နှာရည် (နှပ်) ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်က ရောဂါကို တိုက်ဖျက်တဲ့ စနစ်ထဲမှာ အတော်အသုံးကျတဲ့ နေရာမှာ ပါတယ် .. နှာခေါင်းကတဆင့် အသက်ရှူရင်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ရောက်လာမယ့် ရောဂါပိုး အမျိုးမျိုးကို ပထမဆုံး တိုက်ဖျက်ဖို့ နှာခေါင်းထဲက ဂလင်းတွေက နှာရည်တွေ ထုတ်ပေးတယ် .. ဒါကြောင့် နည်းနည်း အအေးမိတာနဲ့ နှာရည်တွေ ထွက်လာတာပေါ့ .. အမှုံအမွားတွေ ၀င်လာရင်လဲ .. နှာခေါင်းမွေးတွေက ဖမ်းထိန်း တားဆီးတယ် .. ဖမ်းထိန်းထားတာနဲ့ နှာရည်မှာ ကပ်နေတာနဲ့ ပေါင်းပြီး နှပ်ချေး အနေနဲ့ အပြင်ကို ချေဆတ် ထုတ်ကြတယ် .. ဖုံမှုန့်များများ ရှူမိရင် နှပ်ချေး မဲမဲတွေ ထွက်ခဲ့ဖူးမှာပေါ့ .. အဲဒီလို စနစ်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်နေတာ .. ဒါကြောင့် နှာရည် နှပ်ချေးမှာ ဖုံမှုန့်တွေ .. ရောဂါပိုးတွေ ပါမယ် ဆိုတာ သိလောက်ပြီ ထင်တယ် ..
နှာချေတဲ့အခါ နှာရည်တွေ တခြားသူတွေကို စင်တတ်တာ ဓမ္မတာပါ .. နှာချေလိုက်ရင် နှာရည်တွေဟာ နှာခေါင်းကနေ အရှိန် ပြင်းပြင်းနဲ့ အပြက်ဖက်ကို စင်ထွက်တာ .. အကြမ်းဖျင်း သုံးပေက ခြောက်ပေလောက်အထိ ရောက်တတ်တယ် .. နှစ်ပေ သုံးပေ လောက်က မြင်နိုင်တဲ့ နှာရည် .. ပေကျံတတ်တာမို့လို့ သိသာတယ် .. အဲဒီအခါ မြည်တွန်တောက်တီး အပြစ်တင်တာ ခံရမယ် .. ကျန်တာက အမှုံအမွား ဆိုတော့ မမြင်ရဘူး .. ဒါပေမယ့် ဆားစ် လို ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးလို .. ပြင်းထန်တဲ့ အဖျားရောဂါတွေအပါအ၀င် ရိုးရိုးတုပ်ကွေး .. အအေးမိတာတွေ ကျတော့ ကူးပြီပေါ့ .. တီဘီဆိုလဲ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကူးတာပဲလေ .. တိုက်ရိုက် မကူးတာတောင်မှ အဲဒီအမှုံအမွားတွေ တင်ကျန်နေတဲ့ အရာတွေကို ကိုင်တွယ်မိတဲ့ လက်တွေက တဆင့် ကူးကြပြန်ရောလေ .. ရုတ်တရက် ရောဂါလက္ခဏာပြပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါကျတော့ လူတွေ သတိ ထားမိကြပေမယ့် .. တီဘီလို ကြာမှ လက္ခဏာ ပြတဲ့ ရောဂါ ကို သိပ် သတိမထားကြတော့ဘူး ..
နောက်ပြီး ရှိသေးတယ် .. နှပ်ချေးကို ညှစ်ပစ်ပြီး ဘေးက ဘယ်သူရှိရှိ သတိမထားပဲ ဖတ်ကနဲ ခါပစ်လိုက် တယ် .. အဲဒါတွေိ တွေ့ရမြင်ရတာ အဆင် မချောသလိုပဲ .. ငါ့လက်ကလွတ် ပြွတ် ဆိုပြီး ကလေးဘ၀ကလို လက်လွတ်စံပယ်လုပ်သလို ဖြစ်နေတယ် .. အဲဒီအကျင့်ကိုတော့ လူတိုင်း ပြင်ဖို့ လိုတယ် .. အကောင်းဆုံးက လက်ကိုင်ပ၀ါ .. ဒါမှမဟုတ် အခု အသုံးများတဲ့ တစ်သျှူးနဲ့ သုတ်ပေါ့ .. နောက်တစ်ချက်က အဲဒီ တစ်သျှူးကိုလဲ နေရာတကာ ပစ်ချဖို့ မသင့်ဘူး ..
နှာချေကြတဲ့အခါ သာမန်လူတွေအနီးမှာ ဖြစ်ရင် ဒီလို .. ဒီလောက်ပဲ ဖြစ်တတ်ပေမယ့် .. ကင်ဆာဖြစ်လို့ ဆေးသွင်း .. ဓါတ်ကင်နေရတဲ့ လူတွေနားမှာ .. ဆိုရင်တော့ သိပ် ကြောက်စရာ ကောင်းသွားပြီ .. ဘာလို့ ဆိုတော့ သူတို့က ဆေးအရှိန်ကြောင့် ကိုယ်ခံအားတွေ ကျနေချိန်လေ .. လူနာ သတင်းမေး သွားပါတယ် .. လူနာကို ရောဂါထပ်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားမှာ အသေအချာပဲ .. ကိုယ့်အတွက်တော့ နှာစေး ချောင်းဆိုး လောက်ပဲလေ .. သူတို့အတွက်တော့ နမိုးနီးယား အဆင့်ထိ ရောက်သွားတတ်တယ် .. အဲဒီလိုသာ ဖြစ်ရင် သူ့အတွက် သက်တမ်း တိုသွားမယ် .. တတ်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ ဈေးကြီးတဲ့ ဆေးတွေ သွင်းလို့ သက်သာလာပေမယ့် ခံစားရတဲ့ လူအတွက်တော့ သိပ် မလွယ်ဘူး ..
ဆရာမ ပြောတာနဲ့ နောင်ဆိုရင် နှာခေါင်းရော ပါးစပ်ပါ ဆို့ထားပါ့မယ် ..
ကျွန်မ ပြောတာ .. ဆို့ထားရမယ် လို့ မဆိုဘူးနော် .. ကာရံထားရုံပဲ .. အတင်း ပိတ်ဆို့မိလိုက်ရင် သူများအတွက်တော့ လုံခြုံသွားပေမယ့် ကိုယ်တိုင်အတွက်ကျတော့ နောက်ဆက်တွဲလာဦးမှာ ..
ဆရာမ ကလဲ မကာတော့ တမျိုး ကာပြန်လဲ တမျိုးဖြစ်နေပြန်ပြီလား .. မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်နော် ..
သြော် .. မဇ္ဈိမ ပဋိပဋာ ဆိုတာကို မေ့နေကြပြန်ပြီ .. ကျွန်မ ပြောတဲ့အထဲမှာ အတင်း မဆို့ရဘူးလို့ ပြောတာ .. ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ .. နှာခေါင်းနဲ့ နားအလယ်ပိုင်းကို ပြွန်လေး တချောင်းက ဆက်ထားလို့ .. အဲဒီဆက်နေတဲ့ ပြွန်က သာမာန်အားဖြင့် ကျဉ်းကျဉ်းလေးသာ ရှိပြီး သူ့ သာမန်အလုပ်ကို လုပ်နေတာ .. နှာချေလို့ နှာခေါင်းကို ပိတ်လိုက်ရင် ပါးစပ်ကိုပါ ပိတ်လိုက်ရင် အတွင်းမှာ တွန်းကန်ထွက်လာတဲ့ အားတွေက နှာခေါင်းထဲက နှပ်တွေကို အဲဒီလမ်းကြောင်းထဲ တွန်းပို့သလို ဖြစ်သွားတတ်တယ် .. နှပ် မထွက်တဲ့အချိန်မှာလဲ လေတွန်းအားက အဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်သွားပြီး နားရဲ့ အလယ်ပိုင်း (နားစည်ကို ရိုက်ခပ်တဲ့ လှိုင်းကို အသံစနစ်ဖြစ်စေဖို့ ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ နေရာ) ကို ဖိအားတွေ များလာ .. နှာရည်တွေ ၀င်တဲ့အခါ ရောဂါပိုးပါ ပါသွားရင် နားပြည်ယိုတယ် ဆိုတာ ဖြစ်လာတတ်တယ် .. နား ပြည်ယိုတယ် ဆိုတဲ့နောက် နားစည်လဲ ပေါက်သွားတာပေါ့ .. အဲဒီတော့ နားလေး လာတာပေါ့ .. နှပ် မထွက်ပဲ နှာချေတာ သိပ်ပြင်းရင်လဲ နားစည် ပေါက်တတ်တယ် .. ဒါကြောင့် ဟတ်ချိုး ဆိုရင် သတိရဖို့ ကောင်းတာက သူများဆီကို မပျံ့လွင့်စေဖို့ရယ် .. ကိုယ့်ရဲ့ နားကိုလဲ မထိခိုက်စေဖို့ .. မှတ်မိပြီနော် ..
ဟုတ် ဆရာမ .. ဟတ်ချိုး (လက်ကိုင်ပ၀ါနဲ့ အသာ ကာရံတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်) ..
သာဓု သာဓု (နှစ်ကြိမ်ပဲ ခေါ်ဦးမယ် နောက်ပိုင်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးမှ နောက်တကြိမ် ခေါ်တော့မယ် နော်)
ကျွန်မက ဟတ်ချိုးတွေ တစ်ခုမကတဲ့သူပါ ဒေါက်တာ .. လက်ကိုင်ပုဝါတစ်ထည်ကို ကိုယ်နဲ့မကွာ အမြဲဆောင်ထားရတယ် … အပူ အအေး လွန်ကဲရင် အနံ့ဆိုးတာရရင် ညစ်ပတ်တာကိုင်မိရင် စိတ်ညစ်သွားရင် အမြဲနှာချေတယ် …
ဂျပန်မှာနေတုံးက .. အလုပ်မှာ အက်စီဒန်င့်ဖြစ်တယ်..။
အဲဒါ ..နံရိုးနည်းနည်းအက်သွားတာမို့ …၁လလောက်က။။။ ဟတ်ချိုးဖြစ်ရင် သေအောင်နာတာ.. ဆရာဝန်မေးကြည့်တော့…။
နှာခေါင်း(အလယ်လောက်)ကို လက်နဲ့အသာလေးးညစ်ပေးတဲ့..။ အဲဒါဆို ဟတ်ချိုးမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့လေ..။
အဲဒါ… နောက်ဆို..လူကြားထဲ ဟတ်မချိုးချင်ရင် ..အဲလိုလုပ်လုပ်လိုက်တယ်..။
ကိုယ်ဘေးသူများ ဟတ်ချိုးရင်… တော်တော့်ကိုအဆင်မပြဘူး..အာပုတ်စော်လည်းနံသေး..။
ေ၇ာဂါကူးစက်ဖို့လည်း .. ရှိသေး..။
ဒါတောင်.. အမေရိကန်တွေများ.. ဘေးလူဟတ်ချိုးတခါလုပ်တာတွေ့ရင်.. ဘလပ်စ်ယူ(Bless you)တဲ့..။
ဟုတ်ပါတယ် .. နှာခေါင်းကို ညှစ်လိုက်ရင် နှာချေချင်စိတ် ပျောက်သွားတတ်ပါတယ် .. သိပ်ချေချင်တဲ့အခါတော့ မရပါ ..
တစ်ခါတစ်လေ မျက်နှာနား နှာလာချေရင် အရမ်းစိတ်တိုရပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူများ မျက်နှာနား မချေတတ်ပါဘူး ။ နှပ်ချေးတွေစင်ကုန်ရင် အဆဲခံရနိုင်တာမို့ပါ ။ နှာချေခါနီး နှာခေါင်း ထိပ်ကို လက်နဲ့ပိတ်လိုက်လျှင် နှာချေရပ်သွားပါတယ် ။ … ရုံးမှာ နှာချေလျှင် ၀က်သံထွက်တဲ့ အစ်မကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်… သူအသံက တစ်ကယ့်ကို ၀က်အော်သံနဲ့တူပါတယ် .. တစ်ခါတစ်ခါအသံကြားရင် လန့်သွားပါသေးတယ် ။ နှာချေသံကိုထိန်းလို့မရပေမဲ့လူကြားကောင်းအောင်တော့ ပြင်လို့ရပါတယ်နော်။ ကိုယ်တွေ့လုပ်ကြည့်ပြီးလို့ပါ ။
ဟတ်ချိုး Bless you= ဟတ်ချိုး ဆိတ်ဖွား အသက်တစ်ရာ အနာမရှိ။ (ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တယ်။)
ရာသီ ဥတု အေးရင် မနက် အိပ်ယာနိုး မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေကိုင်တာနဲ့ စပြီး နှာချေတတ်တယ်။ အနံဆိုးတွေ အပူအအေး ရုတ်တရက် ပြောင်းရင် နှာချေပါတယ်။
နှာချေခါနီး နှာခေါင်းပိတ်တာ အဆင်တတ်ပေမဲ့.. သိပ်နှာချေချင်ရင်တော့ မရတော့ဘူး နှာခေါင်းပိတ်တာထက် ပိုမြန်တဲ့ နှုန်နဲ့ ချေတော့တာဘဲ။ အသိတယောက်ဆို သူနှာချေရင် တခန်းလုံး နံသွားတာဘဲ။ ပြောမကောင်းတော့ အသက်အောင့်နေရတယ်။ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။ နှာချေရင်တော့ လူကြားထဲမှာ တတ်နိုင်သလောက် မချေအောင် လုပ်တယ်. မတတ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ လက်ကာပြီး ချေတာ များတယ်။ လက်က အလွယ်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ဖြစ်နေတယ်။
ဂမုန်းနာ လေး ငယ်ငယ်က သူများ ကို ညာတာပါတေးနဲ့ သွားပြီး နှာခေါင်းမှာ သုတ်လိုက်ဘူးတယ်။ အဲဒီ အကျိုးတွေ ပေးတာလား မသိဘူး မနက် အိပ်ယာ နိုးတာနဲ့ ရေကိုင်ရင် နှာချေကော။ နှာချေပျောက်ဆေး ဆောင်ထားရတဲ့ အထိ ဖြစ်ဘူးတယ်။ အခုတော့ မချေတော့ ပြန်ဘူး။
တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်…. ဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်ပိစိကွေးက လုံးဝအားမနာဘူး သူမကာလည်းကိုယ့်ဘာသာကာတယ်ဆိုပြီး
ဟတ်ချိုး Bless you= ဟတ်ချိုး ဆိတ်ဖွား အသက်တစ်ရာ အနာမရှိ။
အဲဒီလို ပြောတတ်ကြတာ နှာချေရင် သေနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ ရှိလို့ အဲဒီလို ဆုတောင်းတာလို့ ပြောတာ ကြားဘူးတယ်။
ကျွန်တော်က ဟတ်ချိုးလုပ်တာကတစ်မျိုး လူရှင်းတဲ့နေရာမှာတစ်ယောက်ထဲလုပ်တာလေ။ ဂတိုးမှုန့်နဲ့ အဲဒိလိုလုပ်လိုက်ရင် နောက်ကျောတက်တာတွေ ဇက်ကျောထိုးတာတွေ ခေါင်းကိုက်တာတွေ ပျောက်သွားတယ်လေ။ တစ်ယောက်ထဲနေရတာဆိုတော့ ကိုခိုင့်လို နင်းပေျးနှိပ်ပေးမဲ့သူလည်းမရှိတော့ တစ်ယာက်ထဲကိုယ့်ဖာကိုယ် ဆေးကုရတာပဲဗျ လူကြားထဲတော့မလုပ်ပါဘူး။ သူများတွေလာလုပ်ရင်လည်းမကြိုက်ဖူးလေ
ဂတိုးမှုန့် ဆိုတာ ဂမုန်းနာ ကို ပြောတာလား နှာချေတဲ့ အမှုန့်..
နှာချေလို့ရှိရင် ပြောကြတဲ့ bless you ဆိုတဲ့စကား ရက်ဒ်အင်ဒီးယန်းတွေဆီက လာတာလို့ ဆရာတယောက်ပြောဖူးတယ်။ ရှေးကသူတို့ယုံကြည်မှုအရ နှာချေလိုက်ရင် ဝိညဉ်ထွက်သွားတယ်လို့ ယူဆတယ်၊ ဒါကြောင့် တခြားလူက မကြောက်အောင် မင်းကိုဘုရားသခင်က ကောင်းချီးပေးပါစေလို ပြန်ဖြေပေးကြတယ်။
နေ၀န်းနီရေ .. ဂတိုးနှာကို သုံးတာ ကောင်းတာ ရှိသလို .. တို့ ကြီးတော်ကြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက ဂတိုးနှာကို သုံးလိုက်တာ .. နှာချေပါများလို့ ဦးနှောက်အောက်ခြေက နှာခေါင်း အနံ့အတွက် ထွက်လာတဲ့ အာရုံကြောတွေ ပြတ်သွားတယ် .. ဒါကြောင့် သူ သေသွားတဲ့ အသက် (၈၀) အထိ အနံ့ မရတော့ဘူး .. နံလို့ နံမှန်း မသိတော့ဘူး .. နောက်ပြီး မွှန်တယ် ဆိုတာ မသိတော့ဘူး .. ငရုပ်သီးလှော်ရင်တောင်မှ အနံ့ မရတော့ဘူး
ဒါကြောင့် ဂတိုးနှာကို လိုအပ်မှ သုံးပါလားလို့ အကြံပြုပါရစေ
အမြဲတမ်းကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ တစ်တစ်လေ ဇက်ကြောတွေတက် ခေါင်းတွေကိုက်လာမှပါ တစ်လနေမှတစ်ခါလောက်လုပ်ဖြစ်တာ။ တစ်ခြားဆေးထိုးသောက်ကို တော်ရုံတန်းရုံလောက်နဲ့ မလုပ်ဖြစ်ဖူး။ ဆေးရုံတောင် ငှက်ဖျားဖြစ်မှ သုံးကြိမ်ပဲ တက်ဖူးတယ်။ ကျန်တဲ့ အချိန်တွေ ဘာမှမဖြစ်လို့ မရောက်ဖူးပါဘူး။ ခုတော့ ငှက်ဖျားကလည်း မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးနဲ့ပဲ ပျောက်သွားသလား ငုတ်နေတာလားမသိဘူး။ မဖျားတော့တာ 10နှစ်လောက်ရှိပြီ။ ဒီကြားထဲ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးလေ။ စောစောက ဂတိုးနှာလေးနဲ့ပဲ ။
ကားမောင်းရင်းရေဒီယိုထဲ ဟတ်ချီုးအကြောင်းသတင်းကြားတာမို့ ..၀က်ဘ်ဆိုက်ကနေယူတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.။